DidYouKnow ma ogtahay in jawaannada hawada ee markabka la soo furayaa ay inta badan isku dhafan yihiin Fender-ka Caloosha?
Ma Ogtahay in barkinta shilka ee markabku soo furmayo inta badan lagu qaso Fender-ka Caloosha? Barkinta shilka ayaa loo adeegsadaa hawlgallada markabku bilaabmayo sidaas awgeedna waxay u adeegaan ujeedo gebi ahaanba ka duwan Fender-ka Pneumatic. Fender Pneumatic waxay ilaalisaa qaababka iyo maraakiibta, gaar ahaan du ...
DataIntelo ayaa dhowaan soo saartay warbixin dhammaystiran oo loogu magac daray "Suuqa Neefsashada Rubberka Neefta", kaas oo diiradda saaraya bixinta aragti guud oo suuqa ah. Warbixintu waxay siineysaa macluumaadkii ugu dambeeyay ee dhammaan dhinacyada muhiimka ah ee suuqa waxaana la filayaa inuu saameyn weyn ku yeesho ...
Saamaynta ay ku yeelatay suuqa Fender-ka Rubber Fender ee sannadihii 2020-2028
Warbixinta cilmi-baarista suuqa ee pneumatic Rubber Fender ayaa dabooleysa dhaqdhaqaaqa kala duwan ee warshadaha iyo isbeddellada gacan ka geysta horumarinta warshadaha. Intaa waxaa dheer, warbixinta cilmi-baarista waxay sidoo kale bixisaa xogtii ugu dambeysay ee warshadaha, isbeddellada mustaqbalka, wax soo saarka iyo dhammaadka isticmaalaha kobaca iyo saamaynta ...
Falanqaynta koritaanka suurtagalka ah ee suuqa barkinta hawada iyo baahiyaha ciyaartoy waaweyn
”Warbixintii ugu dambeysay ee Cilmi-baarista Hive Research ayaa tilmaamtay in sanadaha soo socda, suuqa bacaha badaha ee adduunka la filayo inuu si dhakhso leh ugu kobco heerka xasiloonida sanadlaha ah ee xasilloon. Daabacaaddani waxay siisaa aragti ku saabsan xogta taariikhiga ah ee suuqa iyo dhacdooyinka ay rea ...
Qaabka suuqa ee marawaxadaha badda
Tani waxay keensatay xoogaa isbeddel ah. Warbixintan ayaa sidoo kale sharraxaysa saameynta COVID-19 ee suuqa adduunka. Soo koobid ka mid ah "Falanqaynta Suuqa Falanqeeyaha Badda ee Pneumatic Marine" oo ay qortay warbixinnada 'Report Insights' waxay si buuxda u baareysaa isbeddellada hadda socda ee horseedaya isbeddelladan tooska ah ee ...
qiimeynta suuqa markab fender
Waxay xoojineysaa aragtida tayada leh ee ay bixiyaan khubarada warshadaha. Warbixintu waxay bixisaa qiimeyn faahfaahsan oo ku saabsan dhaqdhaqaaqa suuqa muhiimka ah waxayna siisaa macluumaad dhameystiran oo ku saabsan qaab dhismeedka warshadaha dusha ka fura markabka. Warbixinta waxay tixgelin siisay arrimo tartan ah, oo ah cr ...
Cabbirka suuqyada bannaanka ee bannaanka, astaanta shirkadda ee muhiimka ah, noocyada, codsiyada
Warbixinta sirdoonka cusub ee la sii daayay ee 2021 waxay bixisaa aragtiyo hodan ah oo ku saabsan rajada kobaca ee suuqa badda adduunka Waxay siisaa saadaasha kobaca muddada-gaaban iyo muddada-dheer ee suuqa, waxayna ku saleysan tahay falanqeyn qoto-dheer oo ku saabsan isirrada koboca kala duwan ee ka kooban suuqa ...
Suuqa Caalamiga ah ee Badaha (Fender Marine) Suuqa
Warbixinta cinwaankeedu yahay "Soo-saareyaasha '2021 Global Marine Fender Market, Noocyada iyo Codsiyada, Saadaasha illaa 2026 ″ oo ay daabacday MarketQuest.biz waxay bixisaa heerar kala duwan oo falanqeyn ah, sida falanqaynta warshadaha, oo ka hadlaysa isbeddellada warshadaha, soo ifbaxaya Iyo qaybaha suuqyada ee kobaca sare, ...
markabka saami qaybsiga suuqa, isbeddellada, codsiyada iyo qiimeynta fursadda
Warbixintu waxay qiyaaseysaa fursadaha iyo xaaladaha suuqa ee hadda jira, waxayna bixisaa aragtiyo iyo cusbooneysiin ku saabsan qaybaha suuqyada u dhigma ee ku lug leh suuqyada markab maraakiibta adduunka inta lagu jiro muddada saadaasha 2020-2025. Warbixintaani waa dadaal dhexdhexaad ah oo ay sameeyeen khubaro maadada ku xeel dheer iyo dabada ...
Falanqee suuqa bacaha hawada ee badda
Warbixinta ayaa sidoo kale soo bandhigtay saameynta COVID-19 ee suuqa adduunka. Cudurka faafa ee uu sababay coronavirus (COVID-19) wuxuu saameeyay dhammaan dhinacyada nolosha adduunka, oo ay ku jiraan qaybta ganacsiga. Tani waxay keentay isbeddelo dhowr ah xaaladaha suuqa. Dhinacyada warshadaha adduunka ee ...
Sidee loo doortaa habka gaadiidka ee Pneumatic Rubber Fender?
Pneumatic Rubber Fender waxaa ka buuxa hawo, hawo cadaadis leh oo ku jirta kaadiheysta ayaa loo isticmaalaa in lagu soo nuugo tamarta saameynta leh, si markabku u qarxo marka uu xirayo, si loo gaaro saameynta shilalka iyo ka hortagga shilalka. . Wax soo saarku wuxuu leeyahay astaamaha xoogga sare, resis duugga ah ...
Taariikhda barkinta shilka
Dulmar guud: Tikniyoolajiyadda soo saarista barkinta shilka ee hawada ayaa waxaa hindisay Shiinaha horraantii 1980-yadii. Tiknoolajiyaddan oo leh xuquuq madax-bannaanida aqooneed ee dalkayga oo dhammaystiran, ka dib 30 sano oo horumar iyo horumarin ah, ayaa hadda leh awood-soo-saaridda maraakiibta 100,000-tan. Codsigeeda ...
Aragtida ku saabsan koritaanka isbeddelka dalabka barkadda hawada ee badda 5ta sano ee soo socota
Tartanka dhismaha awgiis, waxaa muhiim ah in lakala sooco qamriga isticmaalka bacaha hawada ee badda. Sidaa darteed, warbixintu waxay bixisaa falanqeyn qotodheer oo suuq geyn ah oo ku saleysan qaybo badan sida nooca, arjiga, gobolka, iyo isticmaalaha ugu dambeeya. Waxaa loo isticmaalaa in lagu cadeeyo ...
Shirkadda dhisidda maraakiibta ayaa hoggaanka u haysa soo saarista maraakiib cusub oo wata boorsooyinka hawada
Shirkad dhisida maraakiibta oo xarunteedu tahay Glasgow ayaa ku dhawaaqday in markabkeeda cusub ee warshadaha beeraha kalluunka ee Scottish-ka laga bilaabay markii ugu horreysay Clyde. Ferguson wuxuu dhisayaa qoryaha 805 ee loogu talagalay Inverlussa Marine Services, oo si rasmi ah loogu yaqaan 'Kallista Helen'. Markabku waa dooni shaqo ...
2020 (5aad) Qingdao Cilmiga Caalamiga ah ee Sayniska & Teknolojiyada.
Waxaan hadda ku soo biirnay Qabashada 2020 (5th) OST ee Sebtember 22th. ilaa 24aad. Suuq wanaagsan oo loogu talagalay Markabka Bilaabidda Hawada iyo Feejigada Caloosha ee Pneumatic. Qaar ka mid ah warshadaha beeraha ee loo yaqaan 'Deep-sea beeraha' ayaa dalban doona barkado hawo badan oo la buufin karo si ay qalab weyn ugu soo saaraan badda. Shiinaha ayaa bixiyay ...
Sidee loo sameeyaa Platform Floating, Doating floating, House floating Pontoon ama loo yaqaan 'sabeynta Pontoon' iyadoo la adeegsanayo Diyaarado Diyaaradeed oo Ship Launching ah ama Balloon Barin?
Dhibaatadu waxay tahay sida loo doorto cabbirka iyo inta lakab ee Airbag ee aad u baahan tahay, sax? Marka hore, waxaan sameyn karnaa Max. Dhererka waa 24M iyo Min. 1M. Qaabku wuxuu noqon karaa laba si ...
Yatch Daahfurka Airbag
12Th. Ogosto 2020. Waxaan ka caawinnaa macmiilkeennu inuu billaabo 'Yatch' si guul leh. Qeexitaanka. of uu Yatch: Width waa 2.5 mitir dhererkiisuna waa 12 mitir. Miisaanka doonta waa 10 tan. Waxaan u adeegsaneynaa tusaalahan si aan kuu tusno sida loo doorto Diyaaradda Rarista Markabka Maraakiibta ama sidoo kale waxaan ugu yeernaa ...
Qeybta labaad ee Horizon's FD102 khadka superyacht ayaa la bilaabay.
by admin on 20-07-05
Haatan hadda waxaa loogu magac daray To-Kalon ka dib fikradda Plato ee quruxda, markabku wuxuu dhawaan noqon doonaa FD102-kii ugu horreeyay ee loo dhiibo milkiilayaasha Mareykanka, kuwaas oo ah kuwa ugu horreeya macaamiisha ardaaga. Markuu dhammeeyo tijaabooyinka badda, doontu waxay ku jirtaa jadwalka inay timaaddo Fort Lauderdale bisha Juun waxayna kulankeedii ugu horreeyay ka samayn doontaa 2020 Fort Lauderdale ...
Triac in loo sameeyo qalabaynta dhisaha doonyaha caalamiga ah
SU'AALAHA 'Triac Composites' waxay dhisi doonaan bareesooyin iyo wasakhahaasi 45 45 catamaran Dibad u bixinta ...
Boorsada Hawada ee Markabka, Fender Rubber, Barkinta Hawada Badda, Block isku dhafan, Maraakiibta Tec, Shiinaha Rubber Fender,